Free Thinker: Short Term Visit Pass ကို သက်တမ်းတိုးပုံ
ကျုပ်တို့ဆီကတော့ ပိုက်ဆံတောင် ငွေသားကို ဖလပ်ဖလပ်နဲ့ ပယ်ပယ်နယ်နယ် ရေလိုက်ရမှ ကျေနပ်တာဆိုတော့ ဟဲ့၊ ငါ့ပိုက်ဆံတွေ ဘယ်များရောက်ကုန်ပါလိမ့်မလဲလို့ တွေးပူတာကတကြောင်း၊ ပိုက်ဆံကိုမမြင်ရတာကြောင့်တကြောင်းကြောင့် online banking သုံးရမှာ လက်ခပ်တွန့်တွန့်။
စင်ကာပူမှာနေတဲ့ လူတွေကတော့ online application တွေနဲ့ အသားကျနေတာမို့ ပြောပလောက်အောင် မဟုတ်ပေမဲ့ မြန်မာပြည်က ခုမှ လာဘို့လုပ်နေတဲ့သူတွေကျတော့ အွန်လိုင်းကနေ ဗီဇာလျှောက်တာကို သိပ်မယုံမရဲ။ eVisa လျှောက်တာ reject ဖြစ်တာများလို့ သံရုံးကို လူကိုယ်တိုင်သွားလျှောက်ရမလား မေးလာသူကလည်း များမှများ။
မပူပါနှင့် ညီအစ်ကို၊ မောင်နှမ၊ တူတူမ၊ ကြီးဒေါ်၊ ဘကြီးဘထွေးများခင်ဗျား -
အွန်လိုင်းကလျှောက်တာနဲ့ စာရွက်နဲ့တင်တာ ထပ်တူထပ်မျှ အတူတူပါဘဲခင်ဗျား။ ပြောကြစတမ်းဆို အွန်လိုင်းကလုပ်တာ ပိုတောင်မြန်ပါသေး။ MOM ဆို သူတို့ဆီတင်တဲ့လိုင်စင်တွေကို စာရွက်တွေနဲ့တင်တာ လုံးဝလက်မခံပါဘူး။ Online submission က compulsory ပါ တဲ့ခင်ဗျ။
သည်တော့ ဗီဇာလျှောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Short Term Visit Pass ကို သက်တမ်းတိုးတာဖြစ်ဖြစ် online ကနေ စိတ်ချလက်ချသာ လုပ်ကြဘို့အကြောင်း (အယ်မယ်လေး၊ ခင်ဗျားတို့ပြောရတာ မောထှာ။)။
၁။ Link ကိုသွားပါ။
၂။ Individual ကိုရွေးပါ။
၃။ မိသားစုဝင်တွေအတွက် Apply for extension up to 89 days ကို ရွေးနိုင်ပါသည်။
၄။ တခြားသူတွေအတွက် Apply for extension up to 30 days ကိုရွေးပါ။
၅။ နောက်ပြီး ပြထားတဲ့အကွက်မှာ လိုတာတွေဖြည့်ပါ။
Date of Birth: (မွေးသက္ကရာဇ်)
Sex: (လိင်) (ကျား/မ)
Country of Birth: (မွေးဖွားရာနိုင်ငံ)
Travel Document No. (Passport No.) (ပတ်စ်ပို့နံပါတ်)
Travel Document Issue Date: (ပတ်စ်ပို့ထုတ်ပေးသည့် ရက်စွဲ)
Travel Document Expiry Date: (ပတ်စ်ပို့သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့် ရက်စွဲ)
Purpose of Visit: (အဘယ်ကြောင့် စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ လာသည်)
DE Card No. (White Card No.) : လေဆိပ်မှအ၀င်တွင် လ.၀.က တုံးထုပေးလိုက်သော စာရွက်ဖြတ်ပိုင်းလေးပေါ်ရှိ နံပါတ်ဖြစ်၏။ အောက်တွင် နမူနာပြထားပါသည်။
Address in Singapore: (စင်ကာပူတွင် နေထိုင်သည့်လိပ်စာ)
ထို့နောက်အောက်ဘက်မှ မေးခွန်းလေးခု (a), (b), (c), (d) ကို ဖြေပါ။ Yes, No သင့်ရာတစ်ခုကို ရွေးပါ။
ထို့နောက် Proceed လုပ်ပါ။ Confirm လုပ်ပါ။
၂ ရက် ၃ ရက်လောက်ကြာလျှင် ထို website link မှာပင် enquire status ကို မိမိပတ်စ်ပို့နံပါတ်၊ white card no. ဒါမှမဟုတ် မိမိပတ်စ်ပို့နံပါတ်၊ Passport expiry date တို့နဲ့ စစ်နိုင်ပါတယ်။
Approve ဖြစ်ပြီဆိုရင် approval letter ကို download လုပ်ပြီး print ထုတ်သိမ်းထားပါ။